မုရန်မြန်မာပြည်ခရီးစဉ် Facebook မှတ်တမ်းအချို့ (April, May 2014)
ဆရာတော် တရားဟောချက်မှာ ကျမ်းပုဒ် ဆာလံ၄၆ ငြိမ်ဝပ်စွာရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ စိတ်ပူနေကြတုန်းပဲဆိုရင် စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့၊ အဓိကအချက်ဟာ အရင်းခံမေတ္တာမရှိသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဂပေမေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်။ လူတွေက ခွဲခြားပြီး ချစ်ကြပေမဲ့ သခင်ခရစ်တော်ကတော့ ဘာမှမခွဲခြားပါဘူး။ စာတန်ကလွဲရင် အားလုံးကို ချစ်ပါတယ်။ အားလုံး
Read more: မုရန်မြန်မာပြည်ခရီးစဉ် Facebook မှတ်တမ်းအချို့...
သက်သေခံချက် - မြန်မာပြည်အလည်ပြန်ခရီးစဉ်နှင့်ခရစ်စမတ်ဆုမွန် (Aung Lwin)
I went to Myanmar and stayed there for3weeks. I really hadavery good time because I met some of my old friends and relatives and spent some time with them. They all are my loved ones so I was very happy to see and meet them all. When I
Read more: သက်သေခံချက် -...
ပီနန်မြို.မှမိုးရက်များ(၁၀) (၁၂) Rev.Cho
May 20, 2012 at 10:11pm
ပီနန်လာ.ဆာမှာအဓိကအနေနဲ. အချဉ်ဓာတ်ရှိတဲ. ပန်းရောင်ပန်းကလေးတွေပါပါတယ်။
စားကောင်းတဲ.အဲဒီပန်းလေးတွေကို ပီနန်တောတောင်ထဲကရရှိတာပါ။ အနံ.မွှေးမွှေးလေးနဲ.စားလို.တကယ်ကောင်းတာပါ။ မုန်.ဖတ်ကတော.နန်းကြီးဖြစ်ပြီး
Read more: ပီနန်မြို.မှမိုးရက်များ(၁၀) (၁၂) Rev.Cho
မြန်မာများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေသော ကာစီနိုသင်္ဘောကြီး m/v Amusement World, Penang, Malaysia
ဒူးလော့မစ်ရှင်သင်္ဘောအကြောင်း စင်ကာပူယုဒသန်အသင်းတော် သွားရောက်ခဲ့စဉ်က ဆောင်းပါးဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သင်္ဘောကြီးစီးပြီး ကမ္ဘာပတ်မစ်ရှင်လုပ်တဲ့အကြောင်း သင်္ဘောနဲ့လိုက်ပါ လုပ်အားပေးလိုသူများက မိမိစရိတ်၊မိမိပေးပြီး တမြို့ဝင်၊တမြို့ထွက် မစ်ရှင်ခရီးစဉ် တနည်းအားဖြင့် မိတ်သဟာရ၊တွေ့ဆုံ၊
Read more: မြန်မာများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေသော...
THE KAREN TODAY and Christian Churches in USA
Saturday, 21 February 2009 (Re-post)
THE KAREN TODAY
Sd/- San C.Po, Shwe Ba, Hla pe, Sydney Loo Nee, Saw Pe Tha.
1st, Thalay - Htaik Koppho - Pyatho 2678.
This is An Historic Day. It is our first officially recognized National Day. It isaday of opportunity. We are emerging from
Read more: THE KAREN TODAY and Christian Churches in USA
မြန်မာ့စက်မှုလက်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလေ့လာခြင်း (အမှတ် ၃ နေပြည်တော်)
ဗွန်းတောင် ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့လေးမှ ခရစ်တော်ရုပ်ပုံ Vung Tau, Vietnam